Nezvedu - Mora Mujaho Wolfgang Mohr
IZVI ZVIRI MORA RAKO
Izvo zvese zvakatanga muna 1994 pane kart track muKerpen, Manheim: rudo rwe kart kumhanya rwakatangwa mukati medu. Kubva pamavambo takafambisa chassis yeiyo Kali Kart brands - nhasi chiziviso chinozivikanwa pasi rese seCRG uye chakabudirira kwazvo. Panyaya yemjini, takashanda neiyo TM uye Pavesi brands.
Kubva ipapo takaramba takavimbika kune izvi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro kusvika nhasi. Pakati peino nguva yakawanda yakanga ichitoitwa neni. Karting nebasa rakabatana rakanga risingaiti uye rakapusa sezvaari nhasi. Isu taida kuve chikamu cheiyi kuvandudzika uye saka takatanga Mora racing muna 2000 kupa vatengi vedu sarudzo yemhando yepamusoro zvigadzirwa, pamwe nezano uye nerubatsiro runoshanda. Kubva mukuchiva uku kwakakura kuita kuva imwe yekutungamira kart online muGerman mumakore akatevera. Vatengi vedu vanoziva chikonzero.
Ikozvino, yedu yemakumi maviri emakore, tiri kupa vatengi vedu chigadzikiso chakazara, zvakanyanya kugadzikana zvekutenga uye kubvunza ruzivo kupfuura nakare kose. Saka vimba nenyanzvi mukutora.
Kumaneja Director Mwana Mujaho
IZVO ZVINOTAURWA NEVATENGI Vedu
"Ane hunyanzvi mubhizinesi wekubatana naye ane ruzivo rwakawanda rwemhanya. Anobatsira nezano uye nekuita uye nezvimwe zvinhu zvinopihwa. Simply top .."
"Ini ndinogona chete kutaura zvinhu zvinovaka nezveMwanakomana-Mujaho. Wolfgang Mohr anoedzawo kutsigira mutengi wevakuru veTV mamodeli !!! ... Thumbs up !!!"
"Yekutanga injini kudzokorora - injini yaiita senge nyowani mushure mekukurisa uye iine simba rakawandisa. Inotyaira yakangwara chete. Basa repamusoro !!! Chepamusoro shopu"
"PASQUALE" on shopauskunft.de
ZVINOKOSHA ZVINOKOSHA KUTI UYE